I-Fairway encane e-Mahogany Run, i-Quiet & Cozy - I-Airbnb
I-Fairway encane e-Mahogany Run, i-Quiet & Cozy
Saint Thomas, St. Thomas, i-U.S. Virgin Islands
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Nicolette
U-Nicolette Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa e-Little Fairway, indawo encane enhle yezithandani noma umuntu ohamba yedwa! I-Studio Condo ethokomele etholakala eFairway Village eMahogany Run.
I-Little Fairway incane, i-500 square foot, i-condo ohlangothini olusenyakatho ye-St.Thomas. Inekhishi eligcwele futhi iqhelelene nephuli! Lesi sikhala esikhanyayo nesincane siyindawo ekahle yokuvakasha kulesi siqhingi esincane!
Eduze kwaseMegan's Bay, isihlalo sikaDrake, nenqwaba yezindawo ezikhanga izivakashi, ungaqiniseka ukuthi uyitholile indawo ekahle!
I-Little Fairway iyi-condo encane yesitudiyo. Ngamafidi-skwele angu-500, lesi indawo efanelekile yabashadikazi abahambayo, umuntu ohamba yedwa noma uhambo lomsebenzi.
Lesi situdiyo esikhanyayo, esithulile sinombhede othokomele olingana nenkosi, i-balcony yangasese, kanye nokufinyelela echibini elinokubukwa okuhle!
Kukhona izindawo zokudlela ezimbalwa kanye nesitolo sekhofi eduze, futhi ngemoto eyimizuzu eyi-10 ukuya e-Megan's Bay noma esihlalweni sika-Drake, lena indawo ekahle yokuhlola isiqhingi sase-St. Thomas!
Uhlangothi olusenyakatho ye-St. Thomas luyindawo enhle. Indawo yaseMahogany Run iwumphakathi onesango, kodwa iLittle Fairway isendaweni yokuma yodwa eyakhiwe kude nabo bonke abanye. INorthside ithule, iluhlaza futhi iluhlaza! Akukho ukushoda kwemibono emangalisayo e-Little Fairway.
Izinto eziheha izivakashi kanye nokuthenga kwasendaweni kukude nje ngemoto. Kunezindawo zokudlela ezi-3 (i-Old Stone Farmhouse yento enhle kakhulu; i-Root 42 yokudlela nje; i-Brooks Bar ye-cuisine yasendaweni) kanye nesitolo sekhofi (Northside Grind) ngaphakathi kohambo lwemizuzu emihlanu.
Indawo yami iyatholakala uma ngingekho esiqhingini, ngakho nakuba ngitholakala kalula ngocingo noma ngomlayezo, angitholakali mathupha uma kukhona izivakashi. Jabulela ubumfihlo bakho!
UNicolette Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint Thomas namaphethelo